Fathia’s Story: Saving loved ones from torture and death - Telling the Real Story
Fathia waxay timid Sweden sanadkii 2005 iyadoo ay dhashay gabar yar. Ka dib markii ay kala badh qoyskeedii ka lumisay dagaalada ee Soomaaliya, ayay ka carartay dalka, iyada oo laba carruur ah ka tagtay. Safarka ay ku maraysay Itoobiya, Suudaan iyo Liibiya, waxay ku soo aragtay xaalado naxdin leh, argagax iyo xadgudub. Waxay ka gudubtay Badda Dhexe, iyada oo waqti ku qaadatay Talyaaniga, ka hor inta aysan ugu dambeyntii Sweden gaadhin. Dhawr sano ka dib, waxa soo wacay wilkeeda oo tahriibiyal ku haystan Suudan.
“Waxaan weydiiyay sababta uu ugu sugan yahay Suudaan. Wuxuu yidhi, “Hooyo, waxaa i haystayaal tahriibayal!” Markii aan maqlay inaan ku dhawaad dhintey. Waan ogaa waxa ay taasi ka dhigan tahay iyo inaanan awood lahayn. Waan barafoobay. Waan fikiri kari waayey, waxaanan bilaabay gariir. Waxaan weydiiyay halka uu walaalkiis joogo iyo haddii ay wada joogi lahaayeen, laakiin wuxuu igu yidhi keli buu ahaa. Aniga oo ah hooyo xitaa taas ka sii darneyd inaan maqlo. ”
Afduubeyaasha ayaa dalbaday lacag dhan 700 oo doolar oo madax furasho ah halka Fathia ay ku guuleysatay inay taas ka siiso kaalmada daryeelka bulshada ee ay hesho. Laakiin ganacsatada kama aysan sii deyn wiilkeeda; waxay ka iibiyeen kuwa ka ganacsada Liibiya oo xittaa dalbaday lacag intaas ka badan. Lacagta madax furashada ayaa hada ah $ 5,500. Waxay ku hanjabeen inay dilayaan haddii aysan dirin lacagta. Laakiin la'aanta ehelo ama saaxiibo dhow oo ku nool Yurub, malayaabi kari wayday sida loo ururiyo lacagta.
“Waxay iga dhigtay inaan dareemo sidii inaan qabriga ku jiray oo meel aan orod lahayn . Way ii yeeri lahaayeen oo waxay iga yeeli doonaan dhageysiga wiilkeyga oo ooyaya. Asalka Idriss wuu qaylinayay, u dir lacagta, u dir lacagta! Waxaan idhi, wiilkayga ha dilin! Waan bixin doonaa! Ma aanan ogeyn waxaan dhahayay. Wiilkeyga waa la garaacay waana la i qasbay inaan maqlo. ”
Sida la sheegay xanuun ka dillaacay xarunta tahriibinta ee wiilkeeda ku dhacday. Waxay ka bixisay lacag dheeraad ah si ay uga hesho daawo. In kasta oo uu ka soo kabsaday xanuun, waxaa lagu toogtay si xunna loogu dhaawacay rabshado ka dhacay xerada.
Wiilka Fathia ayaa loo waday dooni tahriibayaal ah oo ku sii jeeday Talyaaniga, oo awoodi waayey inuu socdo oo xaaladdiisu halis tahay. Markii markab laga soo badbaadiyay hay'ad samafal, waxaa helikobtar loo qaaday isbitaal ku yaal Malta. Iyadoo sugaysa cusboonaysiinta xaaladiisa, Fathia waxay baratay war xun. Wiilkeedii labaad wuxuu ka tagay Soomaaliya wuxuuna kusii jeeday Yurub. Waxay ka bariday inuu joojiyo oo uu soo noqdo, laakiin waxay ahayd xilli dambe in la noqdo.
"Waxaan u sheegay inuusan safrin. Waxaan idhi waa inuu joogo meesha uu joogo. Waxba kama jiraan qiimaha dabka, jahwareerka, muhaajiriinta murugada leh ayaa soo socda. Waxay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan badda dhexdeeda ama lamadegaanka dhexdiisa. ”